Mpiblaogy Malagasy vavolombelona nanatri-maso ireo trozona niantsona ka maty tan-tanety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2008 15:06 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, 繁體中文, 简体中文, Italiano, 日本語, فارسی, English
[SASIN-TENY AVY AMIN'NY MPANDIKATENY : Araky ny fanamarihan'ny namana Jentilisa dia Feso no dikantenin'ny dauphin. Mba hahatsotra ny famakiana ny lahatsoratra anefa dia ny teny Trozona (trondro vaventy be) izay nadika avy tamin'ny lahatsoratra Anglisy hoe Whales no nofidiako hampiasaina]
Tsikaritra tamin'ny voaloamboloahan'ity volana Jona 2008 ity fa nisy andian-trozona manao “loham-boatavo” efa mahatratra ho zato izay “very dia” ka nandao ny ranomasina fonenany mba hamonjy ny faritra be honahona any Antsohihy (faritra Avaratra-Andrefan'i Madagasikara). Ny namana Harinjaka sy ny Fanamby izay fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana [ONG] no isan'izay voalohany nitatitra sy nanaitra momba izao voina voajanahary izao sady nanapariaka sary.
Mbola samy eo am-pikarohana izay mety ho anton'izao fiantsonan'ny trozona ho faty tan-tanety izao na ny mponina any an-toerana ny ministera mpiandraikitra [ny fanjonoana ?] izay miezaka koa ny hanavotra ireo trozona vitsy izay mbola tsy namoy ny ainy.
Isan'ireo lalam-pikarohana vitsy izay arahin'ireo manam-pahaizana mikasika izay antony mety ho nahatonga izao izay mety ho otrikaretina (champignon na virus) namely ireto andian-trozona ireto, na koa vokatry ny fampiasan'ny tafika an-dranomasina na ireo orinasa mpikaroka solika an-dranomasina “sonar” [onjam-peo faran'izay iva indrindra].
Fikambanana Malagasy izay mivoy ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana ny Fanamby izay mifantoka amin'ny famporisihina ireo hevitra nipoitra any am-potony sy ireo teknolôjia vaovao sady farany.
Ny namana Harinjaka, izay tsy zoviana amintsika intsony dia sady miasa anivon'ny Fanamby no isan'ireo mpiblaogy izay vy nahitana ny fikambanana Foko-madagascar no mbola mpitatitra momba an'i Madagasikara koa anivon'ny vohikala fampahalalam-baovao vaovao “The observers by France 24“; nanaiky ny hanolotra vainteny vitsy mikasika izao voina voajanahary mampalehelo izao izy (marihina fa teny Frantsay no fiteny nanaovana izany tafatafa izany) :
F: Oviana ary amin'ny fomba ahoana no nandrenesanareo mikasika ireo andian-trozona ireo ?
Harinjaka: Mpitari-dia mpizahatany izay namangy iny faritra iny tamin'ny faha-3-n'ny volana Jona 2008 no nanaitra ny fikambanana Fanamby. Ny sasany tamin'ireo mpizahatany ireo dia naka andian-tsary mba ahafahany manaitra ireo sampan-draharaha amin'ny akamehana manoloana izao voina izao. Ireo faritra honahona izay nitrangan'izao voina izao dia tokony sahabo ho 600 km avy ao an-drenivohitra Antananarivo. Tsy dia ny fihazoana izany toerana izany loatra anefa no olana fa izay fananana ny traikefa sy ny isan'ireo olona izay nilaina hiatrehana ny famonjena ireo trozona mbola tsy namoy ny ainy.
F: Inona no fanazavana izay mitombona indraindra ho antom-pisian'izao toe-java mitranga izao ?
H: Dia mbola vinavina daholo aloha hatramin'izao no eo am-pelatanana, etsy an-daniny hevrina ho aretina tsy mbola tsy nisy fandinihana esty ankilany kosa ny ankamroan'ny olona dia mitatitra mikasika ny sambon'ny orinasa Exxon-Mobile [mpitrandraka solika] izay nandao ny seranan'i Antsohihy tamin'ny faha-3-n'ny volana Jona 2008 [fa tsy ny 2 Jona toy ny voasoratra teo aloha]. Ny ampitson'iny, ny faha-4 Jona 2008 [fa tsy ny 3 Jona toy ny voasoratra teo aloha] dia trozona tsy latsaky ny 40 no indray niantsona sy raikitra, izaho dia isan'ireo izay nanatri-maso maromaro tamin'izy ireny anefa andro iray taty afara [aho vao tonga tany]. Averiko indray fa vinavina daholo izany rehetra izany na dia namarinin'ny gazety aza ny fiantsonan'io sambo io tany amin'ny faritra nitrangan'izany voina izany.
F: Nambaranao fa ohatry ny somary hendratrendratra ireo mponina tany amin'iny faritry iny tamin'ny voalohany?
H: Marina izany, rehefa nahita ireto teratany vahiny izay naka sary izato voina nitranga ry zareo dia sady tezitra izy no niteny ireo vahiny/vazaha [tsy fantatro loatra fa mety ho tafiditra ao anatin'ny vahiny koa ny olona tonga avy any Antananarivo] mba hitondra any lavitra any ireo fatin-trozona ireo. Angamba misy fihevitry ry zareo fa ny vahiny/vazaha no Antvoalohany isan'ny anton'izany voina izany.
Tantara hafa mahatsikaiky koa ny tsy nahafahan'ireo mpikaroka namantatra izay fianakaviana misy ireto karazana trozona ireto anivon'ireo fahita aty amin'ny faritr'i Madagasikara. Taty aoriana vao fantatra fa Peponocephala electra na koa dauphin electra [trozona manao “loham-boatavo”] no karazan'izy ireo.
F: Inona no lesona azo tsongaima sahady avy amin'ity voina iray ity?
H: Misy rohy hentitra mipetraka eo anivon'ny Malagasy sy ny trozona/feso [dauphin]. Tsy mba mihaza azy ireny na mihinana ny henan'izy ireny isika Malagasy nohon'ny lovan-tsofinmtsika izay mitatitra ny famonjena nataon'izy ireny ny mpanjono an-dranomasina fahizay. Eto aho dia te-hanao antso avo : tokony heverina izay hamatsiana bebe kokoa mba ahafahana manome vaha-olana amin'ny fomba haingana ny voina toy itony, sy ireo loza hafa izay manambana ny harem-pisamihafian'ny tontolo iainana [biodiversité].
(Nindramina tamin'i Harinjaka avokoa ireo sary mandravaka ity lahatsoratra ity)
(Naoty: *Ny trozona manao “loham-boatavo” [Melon-headed whales] dia mitondra koa ny anarana hoe Peponocephala electra na dauphin electra.
** misy fijerin'ny vavolombelona hafa nampidirina tao anatin'ity tafatafa ity)
ny dauphin dia feso no anarany amin’ny teny malagasy fa moa ve izany ho fantatry ny maro mpamaky ity bolongana ity?
13 Jona 2008, 08:05
Misaotra amin’ny fanamarihana Jentiilisa.
13 Jona 2008, 10:48
Mankasitraka an’i Tomavana nandika ity. (Hi hi, nandramako nadika koa izy ity fa teo amin’ny dikan’ny whales aho dia efa nikatso dia navelako lol).
Fa rehefa hitako ilay hoe trozona vao tadidiko … fa mahagaga indray ny fanamarihan’i Jentilisa. Inona izany ny trozona ? (Miala tsiny somary mihataka ny vaovao).
13 Jona 2008, 16:57
Miala tsiny fa angamba amin’ny anglisy dia fianakaviana iray ny Dauphin sy ny Baleine. Dauphin ireo maty tany antsohihy , ary FESO no anarany amin’ny teny Malagasy. Ka iza ary izany no nandiso, ny tany Antsohihy ve no ts nahay nanavaka ny Dauphin sy baleine sanatria? hihihi.
24 Jona 2008, 06:49
adinoko fa ny TROZONA amin’ny teny Malagasy dia BALEINE kosa amin’ny teny Frantsay
24 Jona 2008, 06:50
Atao akory fa “Traduttore, Traditore” hoy ny hain-teny Italiana na raha adika Malagasy dia “mamadika izay mandikateny” [traduire c’est trahir] 🙂 tsahiviko fa ny lohateny nofidian’ny mpanoratra ny lahantsoratra dia “blogger witnesses whales beaching in madagascar” sady “dolphin” no dikantenin’ny Feso [dauphin]. Misokatra malalaka hatrany anefa ny adihevitra 😉
24 Jona 2008, 13:41